Umenzi weArhente yokuDiliza ukuThengisa kunye neZibonelelo | Ngexesha
Umncedisi wokuhambisa ngenqanawe Izibonelelo zomthwalo woosomashishini abanomdla, iDropshipping yimodeli yeshishini entle kuba kulula ukufikelela kuyo. Ngokuthumela ngokuthe ngqo, unokuvavanya ngokukhawuleza okwahlukileyo ...
Umncedisi wokuhambisa ngenqanawe
Kubarhwebi abanqwenela, iDropshipping yimodeli yeshishini entle kuba kulula ukufikelela kuyo. Ngokuthumela ngokuthe ngqo, ungavavanya ngokukhawuleza imibono eyahlukeneyo yeshishini ngeziphene ezinqongopheleyo, ekuvumela ukuba ufunde lukhulu malunga nendlela yokukhetha kunye nokuthengisa iimveliso ezifunwayo. Kukho ezinye izizathu zokuba ukuhanjiswa ngokuthe ngqo kuthandwe kangaka.
1. Zincinci iimali ezifunekayo
Mhlawumbi elona thuba likhulu lokuthengisa ngokuthe ngqo kukuba unokuvula ivenkile ye-e-commerce ngaphandle kokuba utyale amawaka eedola kuluhlu lwangaphambili. Ngokwesiko, abathengisi kufuneka bachithe imali eninzi ukuthenga uluhlu lweempahla.
Ngemodeli yokuhambisa ngokuthe ngqo, awudingi kuthenga imveliso ngaphandle kokuba sele wenze intengiso kwaye sele uyifumene intlawulo kumthengi. Ungaqala ukuthenga iimveliso kwaye uqale ishishini lokuthengisa ngokuthe ngqo elinemali encinci kakhulu ngaphandle kwesixa esikhulu sotyalo-mali lwangaphambili. Ngaphaya koko, kuba awuthembisi ukuthengisa ngalo naluphi na uluhlu lwezinto ezithengiweyo kwangaphambili njengevenkile yemveli, kukho umngcipheko omncinci wokuvula ivenkile.
2. Easy ukusebenzisa
Xa ungafuneki ujongane neemveliso zomzimba, kulula kakhulu ukuqhuba ishishini le-e-commerce. Ngokuthumela ngokuthe ngqo, awunakukhathazeka malunga:
Ulawulo okanye indawo yokugcina intlawulo
Pakisha kwaye uthumele iodolo yakho
Landa uluhlu lwempahla ngezizathu zobalo
Ukuphatha imbuyekezo kunye nokuthunyelwa ngaphakathi
Qhubeka noku-odola iimveliso kwaye ulawule ukuprinta kwamanqanaba
3. Intloko ephezulu
Kuba awunyanzelekanga ukuba ujongane nokuthenga okanye ukulawula iimpahla, iindleko zakho zentloko ziphantsi kakhulu. Ngapha koko, uninzi lwevenkile ethengisa ngokuthe ngqo ephumeleleyo ngamashishini asekhaya, afuna kuphela ikhompyuter yelaptop kunye nezinye iindleko eziphindaphindayo zokusebenza. Njengoko ukhula, ezi ndleko zinokunyuka, kodwa zisephantsi ngokuthelekisa amashishini emveli.
4. Indawo eguqukayo
Ishishini lokuthumela iimpahla liqhutywa phantse naphi na nge-Intanethi. Ukuba unxibelelana ngokulula nabanikezeli kunye nabathengi, ungabaleka kwaye ulawule ishishini lakho.
5. Uluhlu olubanzi lweemveliso onokukhetha kuzo
Kuba awunyanzelekanga ukuba uthenge iimveliso ezithengiswayo kwangaphambili, unokubonelela abathengi abanokubakho kuluhlu lweemveliso ezithandwayo. Ukuba umthengisi ugcina izinto, ungadwelisa izinto ezithengiswayo kwivenkile yakho ekwi-intanethi ngaphandle kokuhlawula ngaphezulu.
6. Lula ukuvavanya
Ukuthengisa ngokuthe ngqo kuyindlela eluncedo kubanini bamashishini abavula iivenkile ezintsha kwaye bafuna ukuvavanya ukutya kwabaxhasi kwezinye iindidi zemveliso, ezinje ngezixhobo okanye imigca emitsha yemveliso. Kwangokunjalo, esona sibonelelo siphambili sokuhambisa ngokuthe ngqo kukukwazi ukudwelisa kunye nokuthengisa iimveliso ngaphambi kokuzibophelela ekuthengeni isixa esikhulu sempahla.
7. Kulula ukwandisa
Kwishishini lokuthengisa ngemveli, ukuba ufumana amaxesha amathathu kwinani leodolo, uhlala kufuneka uwuphindaphinda kathathu umsebenzi. Ngokusebenzisa abathengisi bokuhambisa ngokuthe ngqo, uninzi lomsebenzi wokuqhubekeka kwee-odolo ziya kuthwalwa ngumnikezeli ngeenkonzo, ukuvumela ukuba wandise ngeengxaki zokukhula kancinci kunye nomsebenzi ongezelelweyo.
Ukukhula kwentengiso kuya kuhlala kuzisa umsebenzi owongezelelweyo, ngakumbi umsebenzi onxulumene nenkxaso kubathengi, kodwa xa kuthelekiswa namashishini emveli e-commerce, amashishini asebenzisa isikali somthwalo othe ngqo alungile.
Qala ishishini lakho lokuthengisa ngokuthe ngqo ngoku
Egqithileyo Ezothutho loLwandle
Okulandelayo: Inkonzo eyongezwe ngexabiso
I-DHL FedEX UPS ichaza inkonzoInqanawa yamazwe aphesheya ...